Qeerroo Oromoof, Uumata Oromoof, Mootummaa Wayyane fi Oromiyyaf
I. Uumani Oromoo TPLF irrati waan hundan Qoqoba cimma irrat goochuu qaba !!
Baratoota Oromoo University hunda keessati wayyanen Fixaa jirti keessatuu, Baratoon University Ambo Agaziin Helecopterna galee Electrica irra kutee dhukana keessa ijoolee fixaa jira kanaafuu Oromoo bakka jirtu.:-
Tigire Irra hin bitiina itti hin gugurina.
Qabeenya Tigire hunda fayyida uumataa akka oluu goochuu.
Tigire waliin quunamtii hunda dhabuu.
Qabeenya Tigire Oromiyya keessa jiru kan Oromoo ta'uu isaa beekamee too'annoo irrati goochuu.
Kara Finfinnee deemuu hunda kutuu,
Konkolata Tigire yaabuu dhisuu.
Homisha ykn midhan kami iyuu Finfinneti akka hin guguree,
Midhan ykn Homisha nyaata gara Finfinne deemu akka Finfinnee hin galee goodha fudha Oromoof keena,
Babuumra fi Konkolatan Gas fi Nyata biyya alati galuu hunda karati dhabba fudha uumataaf qooda.
Meeshaa Garii fi Gooxii, Polisii fi Kabbinoota ganda irra hikachisa Meesha Qeerroo Oromoo hidhachisaa,
Daldalton Malaqa walti qabatii qawwee Qeeerroof Bitafii,
Daldaltoon Oromoo Gibira ykn ashuura hin kafaliina.
Gibira ykn Ashuura hin kaafaliina;
Walgaii wayyane fi OPDO hin deemina
Malaqa Bank TPLF keessa basaa Banki Oromoo galchaa
Sababin isaa erga Mootumman Polisin federlan Daldaltoota Oromoo qabeenya keessan samisa ta'ee Ashuura hin kafaliina.
Mootummaa TPLF Qunamtii hunda dhabba
II. Yoo falmane malee diini nu hin dhisuu. Kanaafuu Uumani Oromoo qabsoo cimmisuu qaba.
Utuu uumani guyya guyyan hirira itti fufee hunda hidhan hin fixaani, yoo nama bayee hidhan ilee waan goodhan hin qaban , yerooo hiriri qabna'uu ammoo jarii wara uummata kakasu danda'aan hidhuu, hidhuu qoofa miti bakka nami hin argine akka dhidheesati geesan boofa nyachisuu kanaaf Oromoo raabiif jeedhii Hirira fi falmii itti fufii wara hidhaman reebama jiran hanga ba'aanti hirira hin dhabnuu jeedha itti fufa.Qabsoon keenya hanga abba biyuuma keenya mirkanesinuti hin dhabatu. Kabinoota Annalee fi Polisii wayyanee gargaran uummataa reeba fi reebisisa jiran irratti tarkanfi keessan hin deebinee fudhachuu qabduu, OPDO/TPLF yoo dutee male hin amanin. Utuu Oromoon Dhidheessa keessati Qoonqoon, Dheebuun, Reebicha fi boofan dhumataa jiru yoo manati galtee raaftee kun cuubuu dha. Oromoo ka'ii Tigiredhan reebama jirachu irra, wagga waggan bo'uu irra falmatee du'uu siif wayya beekii. Kun ilee dirama hojeecha jiruu, utuu dhugumaa Oromoof dhabatan Aannalee hundati Bilbilan Uummata hin hidhina, jeedhu turan utuu Kabinnon OPDO ilaalan Agaziin Mandi fi Kilitu Kara iraa namoota Guree yeroo Dhidheessati geesan Bofa nyachisan OPDOn, Muktar Kadir, Lema Megarsa, Abban Dula essa jiru, Oromoon annalee hunda Maliif Dhiidhesati guramee ajeefama, Kun mana hidha miti. Bona kana Boofatuu mana sana gutee jira, kana International red cross ykn Waldan Fannoo Dimma Addunyaa ni beeka.
Agaziin Oromoo Aanaa hunda irra guuree seeran ala Dheedhessa keessati dararee Boofa nyachisa yeroo jiruu OPDO degeresa goochafi waan jiruuf Kaabinee OPDO hunda irratti Ummani tarkanfi fudhachuu qaba.!!!
OPDO kan amanuu yoo jiratee OPDO/TPLF ta'uu qaba. Haasaa Abba dula fi Marii OPDO namni amanuu nama of isaa hin amane qoofa. Ooromoo OPDO/TPLF amanuu kee irra du'uu wayya. OPDOn erga gaafin uummata siiridha jeedhe Oromoo Maliif Dhidhessatti guramee reebama jira? Kanaafu Utuu Oromoo fi baratoon Oromoo mana hidha keessatti reebama jiran ol deebi’ani ta'uun siiri mitti.
Polisin federala mana daltota magaala mandii furtuu kutun sàma jiru guyya sadìi gidduti suqii sadi furtuu kutani qabenya heddu samanii. Haaluma kanan suqii Tamsgen Abose fi Abiram dhuferaa jala qabenya hedutu samamera. Jarsolin Oromoo Akka Obbo Mizana Gamada, Waljira Dibarii, Hirpha Disasa, Raga'aa Mulatuu, Iyasuu Kasa'uun, Bulti jalata kkf amoo seeran ala Kampy warana didhessa keessati dararama jiru namoota kun akka Fannoon Dimma Adunya dawwatuu fi gargarsa goodhuuf Oromoo itti dirmachuu qaba, Namoon kun Bishan fi Midhan kan hin arganee fi mana ona bofii keessa jiratuu keessati hidhaman akka jirantuu dubatama.
Qilxuu kara ammoo Qabeenya heedun kan samamee yaamuu ta'uu namni kun du'eef jiran isaa hin beekamuu. Jarsa fi jaartiin utuu hin haafin reebama jiru. Haali kun biyyati gara lola sanyiin wal baleesutii deema jira waan ta'eef. Qeeroon Amma hoo nu ga''ee kana caalaa obsuu hin dandeenyuu du'aa ykn jireenya filachuu qabna jeedhan jiru. Kaanafuu diina fi Qabeenya diina akkasumas ergamtuu diina irratti tarkanfi cimma fudhachuu qabna jeecha jiru.Mootummaan Waraana bobosa qabeenya uummataa erga samisisa ta'ee OPDO mirga fi qabeenya Oromoo erga egisisuu hin dandeenye Qeeroon Oromoo qabeenya uummataa egisisuuf dirqamna. Waraani diina Oromoo keessa ba'uu qaba.
III.Mootumman Ethiopia fi Oromiya akka beetanfi.
Oromoo wagoota 20 fayyida Oromiyaan Finfinnee irra argachuu qabduu Kabajan isiin gaafacha ture, isiin kadhacha ture, ama garuu Gaafan Oromoo kana irra darbee jira:-
1.Tigiren nu irra deemuu qabdii, Oromoon ofiin of bulchuu qaba.
2. Finfinnee kana booda kan Oromootii lafa Oromoo waan namaf qooduu (share) goonuu hin qabnuu jeecha jira.
3. Mootuumaan naannoo Oromiya fi Caafeen Oromoo Labsii Oromoo baleesuu basuu ilee Oromiya fi Oromoo bakka hin ba'uu, Oromoof falmachuu waan hin dandeenyef.
4. Mootumman Feederla humnan lafa Oromoo fudhachuuf ijoolee keenya ajeesaa jiruu Kore isaa waan Oromoo fayyaduu nu qoophesa jeene hin eganuu nura dhaba kijiba,
5. Bara 2003 Oromiyan kore Fayyida Oromiyyan Finfinne irra argachuu qabduu basee ture, maliif dhorkamee hara waan isiin qoophesuuf deemtan ni beekna nu dhisaa;
6. Namichi Reporter irrati yaada lachaa jiru kun jeechii isaa Fayyida Oromiyya mormaa jira malee degera hin juruu hubadha jeecha isaa;
7. TPLF ta'ee OPDOn kana booda Oromoo sobuu hin dandessati irrmii tufaa,
8. OPDO utuu Oromoo bakka bu'ee ni falmata ta'ee TPLF xiyyaran University Ambo keessati halkan ijoolee rasasan hin fixuu turte.
9. TPLF Gaafa uumataaf deebii keenuuf utu feedhii qabatee Dhaabilee Oromoo mormitoota mari'achisee deebi uumata deebisa malee Ogannoota Dhabbilee Oromoo hidhuun jibinisa Oromoo hin ibsatuu ture.
10. TPLF ijoolee Oromoo Rasasan University fi Gutuma Oromiya keessati Agaziin fi Waraana biyyolessa itti bobasfte fixaa jiru itti fufun ishee Oromoo lafa irra baleesuuf waan ta'ee Oromoo Tigire of irra kassuff waan dandayee hunda goochuu qaba malee kana booda soba Tigire dhageefachuu hin qabuu.
IV. Qeerroo Oromoo fi Degertoota Qerrroo hundafi.
Hojiin hojeetamuu hundi abba qaba, saganta, Tarsimoof fi kayyoo mataa isaa isaa qaba. Yeeroo itti gegefamuu fi enyuu akka isaa gegesuu Oganna fi Caasaa mata isaa qaba. Waan arga jiru yeero si’ana namii Hunduu Hoji qeerroo kana keessa galee ibsa basa jira. Kun siirii miti keesumati giduu kana ibsaa nama hin liqifmane 2tu ba’ee jira.
1faa Hiriri Marsan lamafa gaafa guyya 28 egala kan jeedhu dha. Kana enyuu basee? Enyuutu qiindasa, nami basee kun Oromoo gargaruuf basee moo ijoolee Oromoo diini akka to’atuuf saganta basee?; Hiriri Nagga qeerroon gegefama jiru, akka kan Party Mormitoota saganta bafatee hayyama gaafatee adeemuu utuu hin tanee FDG waan ta’eef hayyama diina kan gaafatuu fi waamchi median kan adeemuu miti. Hiririi kun erga egalee kasse kan deema jiru Saganta abban hojii kana ittin deema jiru malee enyuu ilee biyya ala ykn biyya keessa ta’ee saganta wal faleesuu itti qoophesuu hin danda’uu. Nami hundu Gorsa fi yaada isaati fakatuu gumachuun dabarsuu danda’aa malee waamicha nama birra keessa galan saganta basuufin diina gargaruu dha.
2faa Baratoota University biyya Tigiray keessa jiran Hirira akka ba’aan waamichii goodhameef siir miti, nami kana basee ijoolee kana balaf saxiluuf malee biyya Tigiray Harka diina keessa ta’aan akka hirira ba’aan goochuu deema du’aa jeechuudha. Ibsa fi wamicha kana ilee qeerroon waan goodhe nuti hin fakatuu. Kanaafu Qeeroon Ogana mataa isaa qaba, caasaa mata isaa qaba wagga 10 gutuu FDG gegesa waan jiruu hoji kana oganna qeeroof dhifamuu qaba. Ogannii Sukara miti Import hin goodhamuu, Ogannii diire qabsoo irra dhalata. Ummani Cimman Dhabba Cimma ijarata Dhabbii cimman amoo ogana cimma dhalcha. Qeeroon Haalaa rakisaa kana keessati Qabsoo Baratoota Oromoo Oganna jiruu kun Ogana cimmaa ta’uu isaa raggan isiin ba’aa. Qabsoon Baratoota Oromoo fi Qeerro Oromoo Ogana hun qabuu warii jeedhan Habasha fi Ergamtoota Habashoota qoofa. Enyuu ilee tana biyya keessas ta’ee biyya ala ta’ee Saganta Qeerroo keessa lixuun bala malee bu’aa akka hin qabnee beekun of quusachuu qabna.